Izihlalo ezihamba phambili ezihamba ngezihlalo zangasese ezi-2021 ezihamba phambili eziThengiswayo - ZNZK
Izihlalo ezihamba phambili ezihamba ngezihlalo zangasese ezi-2021 ezihamba phambili
Ithoyilethi elingenamanzi elinemvelo linikeze indawo yangasese ezimele, eklanyelwe ithimba le-ZNZK, elingasetshenziswa kojantshi abaphezulu, izindiza, imikhumbi, izinkambu zikawoyela, iziteshi zamandla kagesi, omasipala, izindawo ezinhle, izindawo eziphakathi kwezindawo eziphakeme, izindawo ezingenawo amanzi futhi akukho ukungcola, njll.
Ehlukile njengezindlu zangasese zendabuko ezethembele kumandla azo adonsela phansi njengomthombo wamandla, izindlu zangasese zokuhlanza zisebenzisa ingcindezi engemihle ukuze zibe umthombo wamandla. Inqubo yokufakwa kwepayipi ingalandela ingaphandle lesakhiwo, ulayini wangaphakathi, ugobile, futhi ngisho nezikhombisi eziya phezulu naphansi. Kuyabonakala ngempela ukuthi "amanzi agelezela phezulu"
Uma kuqhathaniswa nendlu yangasese yendabuko enezindlela ezahlukahlukene zamanzi adonsela phansi, ithoyilethi elinomshini lisebenzisa umthombo omubi wokucindezela we -0.035MPA ukuya ku -0.055mpa ukuqinisekisa ukuthi kunamandla anele okuhambisa amanzi aluhlaza, futhi ifakwe indlela yokuchoboza ukunciphisa ukuvinjelwa nokungcola kwamaphayiphi kuyinto encane, ngakho-ke akulula ukubanda.
Inhlanzeko eyengeziwe futhi ihlanzekile
Amapayipi asesimweni esivaliwe se-vacuum, ngakho-ke iphunga alikwazi ukusabalalisa, futhi ngeke kube khona amagesi ayingozi namagciwane emapayipini.
Ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo
Lkuyaheha ukusetshenziswa kwamanzi kwezindlu zangasese ezivuthayo kunciphisa ngqo ukuphuma kwamanzi amnyama, kwehlisa umthwalo wokuphathwa kwamanzi abamnyama kamasipala, futhi kuxazulule inkinga yamanzi amnyama akhishwe ngqo emanzini emvelo emphakathini wanamuhla futhi kungcolisa inkinga yemithombo yamanzi; izindlu zangasese ezinomshini ziqoqa indlevumatrated, plus ukungcola okuqoqiwe ngenqwaba yezinto, ezingenza umanyolo ophilayo osetshenziswe kwezolimo eziphilayo. Lokhu kungaguqula imfucuza ibe yingcebo futhi kuzuze ukukhishwa okungu-zero. Ixazulula inkinga yokuphinda isebenze kabusha imvelo, futhi nasekuvuseleleni kabusha ezolimo.
Igumbi labaphathi lifakwe ibhokisi lokusabalalisa elijwayelekile, iswishi kagesi, isokhethi, iwindi lokukhanya kwasemini, isiteshi esihlanganisiwe se-vacuum (sokwelashwa kwemisindo), ithangi lamanzi ahlanzekile nebhokisi lokungcola, elingahlangabezana nezidingo zabantu abayi-2000 kuya ku-3000 endaweni imvelo engenawo amanzi futhi kungekho nendle. Amakhasimende angakhetha ukushisa namagama okulondolozwa kokushisa, futhi izinga lokushisa elingu -50 ° kuya ku-40 °.
Langaphambilini Izihlalo Ezintathu Ezihamba Emanzini Umshini Osebenzisa Umshini Wezindlu zangasese kusuka ku-Factory Price
Olandelayo: Umshini Wokuqoqa Umshini Okhaliphile
I-trailer yangasese ye-Deluxe
AmaTrailer amahle asendlini yangasese
AmaTrailer Omcimbi Wendlu yangasese
I-Luxury Porta Potty Trailer
I-trailer Yokugeza Iyathengiswa
Izihlalo Ezintathu Ezihamba Emanzini Umshini Osebenzisa Umshini Wezindlu zangasese kusuka ku-Factory Price
Izihlalo Eziyisithupha Umshini Wezindlu Zangasese ze-Vacuum Outdoor
Ukuthengiswa Okunethezeka kwezihlalo ezinhlanu zeNdlu yangasese